टोलान्टोong्गो को गुफा | यात्रा समाचार
मेक्सिको योसँग अद्भुत परिदृश्य छ तर प्रायः यस्तो हुन्छ कि हामी सँधै सबैभन्दा लोकप्रिय व्यक्तिहरूसँग रहन्छौं र पर्याप्त प्रचारित नभएकालाई छोड्दछौं। उदाहरणको लागि, यदि तपाईंलाई गुफाहरू मनपर्दछ, ती जादुगरी एयरहरूसहित ती गुफाहरू जुन अंडरवर्ल्डमा प्रवेश द्वार जस्तो देखिन्छ, यहाँ मेक्सिकोमा तपाईंले जान्न सक्नुहुन्छ टोलान्टोo्गो को गुफाहरु।
के तपाईं तिनीहरूलाई चिन्नुहुन्छ? यदि नामले घण्टी पनि बजाउँदैन भने, यो लेख पढ्न रोक्नुहोस् किनकि तिनीहरू तपाईंको अर्को गन्तव्य बन्न सक्छन्।
1 लस ग्रुटास र अन्य पर्यटन स्थलहरू
2 Tolantango Grottoes को भ्रमण गर्नुहोस्
लस ग्रुटास र अन्य पर्यटन स्थलहरू
सबै भन्दा पहिले यो भनिएको हुनु पर्छ तिनीहरू मेजकिटल उपत्यकामा छन्, मेक्सिकन राज्य हिडाल्गो भित्र जसको राजधानी पाचुका हो। हिडाल्गो देशको पूर्वमा छ र यसको केही छिमेकीहरू भेराक्रुज र पुएब्ला हुन्। उपत्यका तीन उपत्यकाहरू मिलेर बनेको छ जहाँ अर्ध शुष्क वनस्पति प्रबल हुन्छ र त्यहाँ केही प्रवाहहरू छन्।
हिडाल्गोसँग धेरै पर्यटक मोतीहरू छन्, र सरकारले एउटा टुरिष्ट म्यापलाई विषयगत "कोरीडोर" मा विभाजित गरेको छ। त्यसो भए तपाईले यसलाई अनुसरण गर्न सक्नुहुन्छ माउन्टेन रनर जसले इकोट्युरिज्म र क्षेत्रको विभिन्न इकोसिस्टममा केन्द्रित राष्ट्रिय निकुञ्जहरू, क्याम्पिंग क्षेत्रहरू र पुरातात्विक साइटहरू, र स्पा कोरीडोर स्पा, प्राकृतिक पोखरी, तातो स्प्रि andहरू र पानी पार्कहरू सहित।
त्यहाँ पनि छ तुलसिंगो कोरीडोर र चार तत्वहरु खेल मा ध्यान केन्द्रित, र Haciendas कोरिडोर १ old औं शताब्दीदेखि १ th शताब्दीसम्म पुरानो फार्महरू सहित। को सिएरा र Huasteca कोरिडोर त्यो पहाड दायरा र मा पार हुन्छ टोल्टिक कोरिडोर जसको मुटु तुलाको पुरातात्विक क्षेत्र हो।
उनले भन्यो, गुफाहरू राज्य राजधानीबाट एक घण्टा मात्र टाढा छन् र यदि तपाईं DF मा १ 198 kilometers किलोमिटर हुनुहुन्छ। या त दूरी छोटो छ। नाम, Tonaltonko, नहुआटल भाषा र अर्थबाट आउँदछ घर जहाँ तपाईं न्यानो महसुस। यस साइटको सुन्दरता years 43 बर्ष पहिले पत्ता लागेको थियो, यसलाई एक पत्रिकाले सार्वजनिक गरेको थियो र त्यसदेखि यसको विकास सुरु भयो।
तोलान्टोन्गो बक्स-प्रकारको ब्यारेल हो, जुन छोटो र साँघुरो ब्यारेल होएउटा क्यान्यन नदी भन्दा बढी, जसको तीनवटा पट्टिमा भित्ताहरू छन् र जसमा गल्तीको मुखबाट मात्र पहुँच गर्न सकिन्छ। आदर्श भनेको इक्स्मिक्विल्पन शहर पुग्नु हो र त्यहाँबाट दुर्लभ १ 17 किलोमिटरको उपत्यका, इकोलोजिकल क्षेत्र र यसका गुफाहरू सम्म यात्रा गर्नुहोस्। यो दुर्लभ चट्टान ढाँचा, प्राकृतिक पोखरीहरू जसमा यसको नक्काशी गरिएको, क्याटि, र अर्ध-उष्णकटिबंधीय वनस्पतिहरूको साथ परिदृश्य हो। यो यति सुन्दर छ कि धेरै उपन्यास यहाँ चित्रित छन्।
तोलान्टोन्गो भन्ने नदी पनि घाटीको ओडारबाट बग्छ। यसको पानी खनिज नुनले न्यानो र र colored्गको हुन्छ र ती पहाड भित्रका जटिल नेटवर्कहरूबाट आएका छन्। यो मार्ग ठीक यो हो कि तिनीहरूलाई 20ºC मा ल्याउनका लागि व्यवस्थापन गर्दछ। अद्भुत! र स्वाभाविक रूपमा, त्यहाँ गुफाहरू पनि छन्। त्यहाँ दुई प्रकारका गुफाहरू छन्, एउटा धेरै ठूलो र सानो।
सबैभन्दा ठूलो गुफा जुनबाट नदी बग्छ र छaसुरुnel, समान घाटी भित्तामा, साँघुरो र १ 15 मिटर लामो। यो वास्तवमै एक कारस्ट गुफा हो र १० बर्ष भन्दा धेरै पहिले यो एक समयको लागि बन्द भएको थियो किनभने यस प्रकारको भूभाग भूस्खलनको लागि अति संवेदनशील छ। यहाँ त्यहाँ stalactites र stalagmites छन् र तापक्रम अर्को भन्दा राम्रो छ। यसको ठीक बाहिर त्यहाँ पोखरीहरू छन् र नदी कम र शान्त छ त्यसैले एक पौडी खेल्न मद्दत गर्दछ।
सुरुnel भएर अघि बढ्न यो सम्भव छ र यो नुहाउने जस्तो हो किनकि जब तपाईं त्यहाँ हुनुहुन्छ तपाईं भित्ता र छत दुबैबाट आउने न्यानो पानीले वाष्पीकरण गर्नुहुन्छ। आश्चर्यजनक एक क्षेत्र मा, भुइँ स्तर पनि खस्छ र यो बाढी छ रूपमा तपाईं पनि पौडन सक्नुहुन्छ। अधिक वा कम समान, तर सानो, दोस्रो गुफा हो। दुबैमा पहाडमा भएको झरनाको प्रतिध्वनन सुन्न सकिन्छ, केही समान छैन।
र सबै भन्दा राम्रो कुरा यो हो कि तपाईं सक्नुहुन्छ गुफामा दुई विशाल गुंबाहरू मा रापेल उही. यो निश्चित रूपमा समुद्र होइन, चट्टानहरूको आर्द्रताको कारणले, तर यो सम्भव छ। सत्य यो हो कि यदि गुफाहरूको सर्वोच्च सुन्दरतामा तपाइँ अधिक सामान्य परिदृश्य, पोखरी वा वेडिंग पुल, उनीहरू यहाँ भन्छन् कि त्यहाँ घाटीको छेउछाउ, रूखहरू जसले छायाँहरू र वनस्पतिहरूलाई छाया दिन्छ तपाईंले एक सुन्दर दिन खर्च गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं शिविर पनि र एक दिन भन्दा धेरै मजा लिन सक्नुहुन्छ यदि तपाईं कम छ भने।
Tolantango Grottoes को भ्रमण गर्नुहोस्
तपाईं सक्नुहुन्छ सार्वजनिक यातायात द्वारा आइपुग्नुहोस् मेक्सिको सिटी बाट, Querétaro बाट, Tepotzotlan बाट वा मेक्सिको एयरपोर्टबाट। तपाईं पनि कार भाँडामा लिन र यिनै ठाउँहरूबाट त्यहाँ पुग्न सक्नुहुन्छ। केवल कुरा मात्र तपाईले हेर्नु पर्छ टोलान्टोong्गो घुमाउरो, जुन केही खतरनाक छ। बाट गुफाहरूको आधिकारिक वेबसाइट तपाईंसँग यी अधिक विस्तृत विकल्पहरू र सम्भावना पनि छ मार्गहरू र मार्गहरूको साथ नक्शा डाउनलोड गर्नुहोस्.
एकचोटि Ixmiquilpan, नजिकको शहर, तपाईं लिन सक्नुहुनेछ गुफामा सिधा मिनी बस त्यो शहरको उत्तर तिर हो। उनीहरू पार्कि lotबाट जान्छन् जुन स्यान एन्टोनियोको चर्च नजिकै छ। सोमबार देखि बिहिवार देखि तिनीहरू बिहान ११ बजे, १::11०, :1::30० र :3:०० बजे र शुक्रवारदेखि आइतबार बिहान १० बजेदेखि साँझ 30 बजे सम्म एक घण्टा प्रस्थान गर्छन्। विपरित दिशामा, तपाईं मिनी बस लिनुहुन्छ होटल «ला ग्रुटा the को रिसेप्शनको छेउमा र सेवा बिहान :6::00० देखि र साँझ 10::6० सम्म (सोमबार बिहिवार :7::30० र ११ बिहान, १, १) मा काम गर्न थाल्छ। र :5::30०; र शुक्रबार आइतबार :7::30० र ११::11० र १::1०, :5::30० र :7::30० साँझ)।
यदि तपाइँको विचार एक दिन भन्दा बढी रहन छ तपाईं एउटा होटेलमा बस्न सक्नुहुन्छ, सामान्य मा धेरै सरल: कोठा, बाथरूम र स्नान, अधिक केहि छैन। वाइफाइ छैन, खाना वा टेलिभिजन छैन। दिमागमा राख्नुहोस् साथै, तिनीहरू मात्र स्वीकार्छन् नगद भुक्तान र मूल्यमा गुफामा प्रवेश समावेश छैन कि Grutas तोलान्टोन्गो स्पा बनाउन। बिहान 8 देखि चेक इन गर्नुहोस् र अर्को दिन १२ मा चेक आउट गर्नुहोस्। स्पा टिकट बिहान 12 देखि pm सम्म वैध हुन्छ, त्यसैले यदि तपाईं एउटा कोठा भाडामा लिनुहुन्छ भने तपाईंले आफ्नो निवासको दिन १ र दिन २ को प्रवेश टिकट कभर गर्नुपर्नेछ।
तपाईंसँग छ होटल विकल्पहरू तर ती सबै जटिल बनाउँदछन्: Hidden 87 कोठासहित हिडन प्याराडाइज होटल, १०० सहित ला ग्रुटा होटल, केवल with with सहित ला हुर्टा होटल, मोलuit्गिंगो होटल जससँग एक टिभी छ। अर्कोतर्फ त्यहाँ केही रेष्टुरेन्टहरू छन्: लास पालोमास, होटल ला ग्रुटाको स्वागतको नजिक, एल हुआमचील, नदीको छेउमा, ग्रुटास होटलको भूतलमा, परास्को एस्कोन्डिडो, आधुनिक र तातो स्प्रि toको नजिकै। सस्तो चीजको लागि तपाईंसँग एल पाराजे, एल पारासो, ला ह्युर्टा, एल मालेकन र एल हुमुचिल छन्।
अन्तमा, यदि तपाइँ मनपराउनुहुन्छ पाल वा पाल त्यहाँ यस प्रकारको पर्यटन गर्ने क्षेत्र छ। र अन्तिम तर कम्तिमा पनि, मूल्यहरू: प्रति दिन सामान्य प्रवेश शुल्क १ 140० मेक्सिकन पेसोको हुन्छ। यसको साथ तपाईं ग्रोटो, सुरुnel, नदी, पोखरी, पर्वतारोहण जान सक्नुहुन्छ, थर्मल पोखरीहरूमा पौडिन सक्नुहुन्छ, झरना र अन्य धेरै देख्न सक्नुहुन्छ, पार्कको दुई क्षेत्रहरू भित्र। यो २ 24 घण्टाको टिकट होइन, यो याद राख्नुहोस्।
यदि तपाईं मिनीबसबाट आइपुग्नुभयो भने, यसले तपाईंलाई गुफाबाट आठ किलोमिटर छोड्छ र पार्कमा जान तपाईंले भ्यान लिनु पर्छ। मूल्यहरु, पार्क को हिस्सा को आधार मा तपाईं जानुहुन्छ, and० र Mexican० मेक्सिकन pesos को बीच हो, र सामान्य टिकट भित्र जानका लागि १० मेक्सिकन पेसो लाग्छ। र तपाईंलाई एउटा विचार दिन, होटल ला ग्रुटामा एउटा डबल ओछ्यानको साथ एउटा बालकनी सहितको एउटा साधारण कोठा 60० मेक्सिकन पेसोको।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » अमेरिका » मेक्सिको » टोलान्टोo्गो गुफाहरू
रोबर्ट पेद्रोजा भन्यो
निस्सन्देह यो मैले अनुभव गरेका सर्वश्रेष्ठ अनुभवहरूमध्ये एक हो, टोलान्टोo्गो गुफाहरू ती चीजहरू हुन् जुन कहिल्यै भुल्दैन
रोबर्ट पेद्रोजालाई जवाफ दिनुहोस्